Android 4.4 KitKat တွင် SMS အတွက်ပုံမှန် application တစ်ခုရှိလိမ့်မည်
Android 4.4 KitKat ဖြင့်သင်ဤစာတိုအမျိုးအစားများကိုပေးပို့ရန်နှင့်လက်ခံရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိထားသည့် SMS အပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Samsung Galaxy Note3အတွက်မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများမိုးရေ
Samsung ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြန့်ချိမှုဖြစ်သော Samsung Galaxy Note3အားဝေဖန်မှုများကိုခံယူနေသော Samsung သုံးစွဲသူများအပေါ်များစွာမကျေနပ်ကြပါ။
Samsung Galaxy Note 3၊ Sprint ဗားရှင်းတွင်ဖုန်းအရည်အသွေးနိမ့်သည်
ထောင်ပေါင်းများစွာသော Sprint အသုံးပြုသူများက Samsung Galaxy Note3သည်ဖုန်းမဆက်နိုင်ခြင်းအတွက်ပြconsiderableနာများစွာကိုပေးလိမ့်မည်။
Fungipedia သည် mycology ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်း [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]
သင်မှိုနှင့်မှိုကိုနှစ်သက်သူလား။ သို့ဆိုလျှင်ဤ app သည်သင့်ကိုအမှန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ ဒီနေ့သွားမယ် ...
Sony ၏ Pinball Rocks HD သည်ဂစ်တာကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် Android သို့ရောက်လာသည်
Pinball Rocks HD သည် iOS သို့ပြုလုပ်ပြီးကောင်းမွန်သောဂီတတေးသံဖြင့်ကောင်းသော Pinball ဂိမ်းကိုတင်ပြသည်။
Samsung Galaxy Tab2အတွက်ကီးဘုတ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အလွန်ကောင်းမွန်သော Mobile Bluetooth Keyboard သည် ၁၀ လက်မတက်ဘလက်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းကို Android စက်များ၊ PC များနှင့် Mac များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်သည် (၁၅ နှစ်) သို့ပြောင်းလဲသွားမည် (သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူမွေးနေ့၏အတိအကျမှာမရှင်းလင်းပေ) ၁၅ နှစ် ...
Alert - WhatsApp အသုံးပြုသူများတွင်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများတွေ့ရှိခဲ့သည်
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ WhatsApp အသုံးပြုသူများကိုအီးမေးလ်မှတဆင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့သတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ Fifa 14 လိုမျိုးကြီးစွာသောဘောလုံးဂိမ်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါတော့မယ်
ယခုသင်သည် Android KitKat ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီး 1000 Nexus7တက်ဘလက်များကိုအနိုင်ယူနိုင်သည်
Google က Android 4.4 KitKat ဗားရှင်းအသစ်ကြေညာသည့်နေ့တွင် 1000 Nexus7ကို KitKat candy bars မှတစ်ဆင့်အနိုင်ရရှိရန်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
fonYou သည်အခမဲ့ဖြစ်စေ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်ဒုတိယလက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိသည်
Android AOSP Project ခေါင်းဆောင် Google မှ Yahoo ကိုထွက်ခွာသည်။
Android-AOSP စီမံကိန်းအကြီးအကဲ Jean-Baptiste Queru က Google ကို Yahoo အတွက်မောင်းနှင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်မရှိပဲ Gmail ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်နောက်နှစ်အတွက် YubiKey Neo ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်
Google က YubiKey ကိုလာမည့်နှစ်တွင်စတင်မည်
Sony Xperia Z1 မှအလင်းရောင်နည်းသောအခြေအနေများတွင်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံအရည်အသွေး
Xperia Z1 သည်ဂျပန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသောအသစ်စက်စက်ဖြစ်ပြီးအလင်းနည်းသောအခြေအနေများမှရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။
Twitter ၏ third-party app developer များနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်
Falcon Pro နှင့် Tweet Lanes တို့ကဲ့သို့တွစ်တာတွစ်တာဖောက်သည်တီထွင်သူများနှင့်ပြသထားသောထူးဆန်းသည့်ဆက်ဆံရေးသည်အလွန်ထူးခြားသည်။
Android 4.4 Kit Kat ၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်များ
Android 4.4 Kit Kat ဗားရှင်းအသစ်ဖြန့်ချိမည့်နေ့နှင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်အချို့ယိုစိမ့်ခြင်း။
အလုပ်တစ်ခုရရန်အကောင်းဆုံး application ၅ ခု
စပိန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်ရှာရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ ၅ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ရိုးရိုးကလစ်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သူတိုင်းထံပေးပို့ပါမည်။
Android လှည့်ကွက် (V) - Android terminals ဖြတ်လမ်းများ
Samsung က Galaxy S4 firmware အသစ်တွေနဲ့အရင် version ကိုပြန်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး
S4 firmware အသစ်များတွင် Samsung သည် root ရလွယ်ကူစေရန် bootloader တစ်ခုရရှိရန်ယခင် version သို့ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် Samsung Galaxy Gear ၏ပုံရိပ်များ
အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့် Galaxy Gear သည် Samsung Companion နှင့်အတူလိုက်ပါရန်အတွက်စုံလင်သောစုံတွဲတစ်မျိုးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလအတွက် Android ဗားရှင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း - Jelly Bean သည်ကြီးထွားလာသည်
မတူညီသော Android ဗားရှင်းများ၏ဖြန့်ဖြူးမှု၏အချက်အလက်များသည်မနေ့ကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး Jelly Bean သည်ကြီးထွားလာသောဗားရှင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိသော root file explorer AntTek
AntTek သည်အခမဲ့ Root file explorer ဖြစ်ပြီး၎င်းမှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် XDA Developers မှတိုက်ရိုက် download လုပ်နိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်နှင့်အသုံးပြုသူများစွာသည် Android အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက် Android ဗားရှင်းအားလုံး၏နောက်ခံပုံများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဆမ်ဆောင်းသည် Lookout နှင့် antivirus ကို၎င်း၏ terminal တွင်ပေါင်းစပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်
Samsung နှင့် Lookout တို့သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ဆိပ်ကမ်းများတွင် ၄ င်းတို့၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဗိုင်းရပ်စ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ သူတို့ကိုပိုမိုကာကွယ်ပေးသည်။
တရား ၀ င် Sony Xperia Z1 ၏ပုံရိပ်များ
Xperia Z1 ဟာမနက်ဖြန်ဘာလင်မှာကျင်းပမယ့် IFA ပွဲမှာပြသမှာဖြစ်ပြီးသေနတ်တွေအများကြီးကိုသေနတ်နဲ့ပစ်မှာဖြစ်တယ်။
ဂူဂဲလ်သည်ဒေသဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ChromeCast မှဖွင့်ရန်တံခါးပိတ်လိုက်သည်
Google သည်၎င်း၏ Chromecast ထုတ်ကုန်အသစ်အား Aircast ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများမှ၎င်းင်း၏ဒေသဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဖွင့်ပြချင်သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းခြေလှမ်းပိတ်လိုက်ခဲ့သည်
၎င်းသည်ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲသောစီမံကိန်းဖြစ်သော်လည်း Google သည် Robo Taxi ကိုဖန်တီးရန်အဓိကကားထုတ်လုပ်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်သည်
Android လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၏ဖန်တီးမှုမှသည် ၄.၃ ကိုမိတ်ဆက်ပေးချိန်အထိအဖြစ်အပျက်များစွာသည် Android ၏သမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
MK 3.0 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် 4K ဗီဒီယိုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်
MHL standard တွင်ဗားရှင်းအသစ် ၃.၀ ပါ ၀ င်သည်။ 3.0K (Ultra HD) ဗီဒီယိုများကစားခြင်းနှင့်ကီးဘုတ်သို့မဟုတ်ကြွက်ကဲ့သို့သောအရံပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ။
Samsung Galaxy2TV၊ တီဗွီကြည့်ဖို့အင်တင်နာပါတဲ့စမတ်ဖုန်း
Samsung က Samsung Galaxy2TV ကိုတီဗွီကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ built-in အင်တင်နာပါရှိတဲ့ Android စမတ်ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဒါဟာဘရာဇီးမှာဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
Dummies အတွက် Android - Android ၏အစ
ဒီဆောင်းပါးမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးအများဆုံး operating system Android ကိုဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်
Google က Android လုံခြုံရေးစနစ်ပုံစံကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်
ပုံစံသည်အလွန်ထိရောက်သောလုံခြုံရေး (terminal lock) နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်သည် application များအမြန်ရယူနိုင်သည့်မူကွဲတစ်ခုကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်။
Ikea သည်၎င်း၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အီလက်ထရောနစ်ကတ်တလောက်ကိုလက်တွေ့အဖြစ်မှန်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီ Ikea က၎င်း၏အီလက်ထရောနစ်ကတ်တလောက်အသစ်ကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်နောက်ဆုံးတည်နေရာရှိဆောင်းပါးများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်တိုးပွားနေသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။
Android အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး က persistent notifications များကို Android 4.3 မှာရှင်းပြသည်
အန်းဒရွိုက် ၄.၃ တွင်နောက်ကွယ်ရှိအချို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်အဘယ်ကြောင့်မြဲမြံသောသတိပေးချက်များကိုဂူဂဲလ်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ကရှင်းပြခဲ့သည်
Android 4.3 အကြောင်း
နောက်ဆုံးတွင် Android 4.3 ပေါ်လာပြီး Nexus ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်အသစ်ထွက်နေသည်။ Android version အသစ်အကြောင်းပြောပြပါမယ်။
Android Cheats (၁) - ပိုင်ရှင်အချက်အလက်
ဤအပိုင်းအသစ်၊ Android Tricks တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ရှင်သတင်းအချက်အလက်ကဲ့သို့ဝှက်ထားသော Android လှည့်ကွက်များအကြောင်းကိုသင့်အားအသိပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Android 4.3 ကိုနောက်ဆုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်
ဒီနေ့ခေတ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Google event မှာ Android 4.3 version အသစ်သည် multi-users များကိုကန့်သတ်ထားသော profiles များနှင့်အတူ support လုပ်တယ်။
Nokia CEO ဖြစ်သူ Stephen Elop ကဘာကြောင့် Windows Phone ကိုရွေးချယ်ရတာလဲဟုရှင်းပြသည်
Nokia CEO ဖြစ်သူ Stephen Elop ကဖင်လန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Android Phone ကို အသုံးပြု၍ Android ဖုန်းများကို၎င်း၏ဖုန်းများအတွက် OS အဖြစ်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
ဂူဂဲလ်ပလေး Web အသစ်
ထိုနေ့၏သတင်းများနှင့်အခြားများစွာမှာသေချာသည်မှာ Google Play ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံဖြစ်သည်။
SanDisk သည်ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး 64GB microSDXC ကဒ်ကိုထုတ်ပေးခဲ့သည်
နာမည်ကြီးသောမှတ်ဉာဏ်ကဒ်တံဆိပ် SanDisk သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံး microSDXC ပါရှိပြီးအမြန်နှုန်းသည် ၈၀MB / sec နှင့်အမြန်နှုန်း 80MB / sec ရှိသည်။
Android သိကောင်းစရာများ (၃) - ထိရောက်သောလုံခြုံရေးနည်းလမ်းများ
Android လုံခြုံရေးဟာအရေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့် Terminal ကိုကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် - PIN, Password, Pattern နဲ့ Face Unlock
ပြုပြင်ထားသော Galaxy Note2သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 288GB နှင့် 9300mAh ဘက်ထရီဖြစ်သည်
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် 2GB သိုလှောင်မှုနှင့် 288mAh ဘက်ထရီကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏ Galaxy Note 9300 ကိုပြုပြင်ခဲ့ပြီးအမြင်အာရုံကိုလုံးဝမေ့သွားသည်။
« Priyanka »သည်သင်၏အုပ်စုများနှင့်အဆက်အသွယ်များ၏အမည်များကိုပြောင်းလဲရန် WhatsApp တွင် bug တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်
မက်ဆေ့ခ်ျထဲမှဖိုင်တစ်ခုအနေဖြင့်သူ့ကိုသင်၏စာရင်းထဲသို့ထည့်ပါက Priyanka သည်အဖွဲ့အားလုံး၏အမည်နှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုပင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ဗီဒီယိုမူကြမ်းများ၊ သင်၏သင်၏ဗီဒီယိုအသစ်တင်ခြင်းစာမျက်နှာအတွက် YouTube ၏ထူးခြားသောအရာ - ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကိုနှိပ်ပါ
«ဗွီဒီယိုများကို YouTube သို့တင်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ အသစ်အဆန်းကိုကြည့်ကြစို့။ ဒီတံဆိပ်ကပထမဆုံး ...
နောက် Gorilla Glass ဖန်သားပြင်များသည်အလင်းအားနည်းခြင်းနှင့်ဘက်တီးရီးယားများဖြစ်လိမ့်မည်
ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်ကပ်ပါးကောင်ဆန့်ကျင်ရေးတို့သည် Gorilla Glass ကိုယခုမှနှစ်နှစ်အထိစီစဉ်ထားသည့်ဖန်သားပြင်များနှင့်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
Cyanogenmod သည် Android နှင့် iOS အတွက် encrypted messaging application တွင် TextSecure နှင့်အလုပ်လုပ်သည်
CyanogenMod နှင့် TextSecure ၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ privacy နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ရန် iOS နှင့် Android အတွက် cross-platform application တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
လာမည့် Street View Trekker ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် Google Maps နှင့်ပူးပေါင်းပါ
သင်၏နောက်ကျောပိုးအိတ်တွင်လမ်းမြင်ကွင်း Trekker၊ သင်မှတ်မိရမည့်နေရာအချို့နှင့်အလိုလျောက်ဓာတ်ပုံများသည် Google Maps သို့ပုံများပို့ပေးလိမ့်မည်။
Android မှာ antivirus အတုတွေအကြပ်အတည်း
Play Store တွင် malware ထည့်သွင်းထားသော antivirus ပရိုဂရမ်များအများအပြားရှိပြီး operating system ထဲသို့ malware ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၎င်းကစနစ်အားမှားယွင်းစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲစေသည်။
Samsung Galaxy Note 8 သည်မကြာသေးမီကမျိုးစပ် terminal (စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်) ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်သော Burj Khalifa မှလမ်းမြင်ကွင်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များ
ဂူးဂဲလ်က၎င်း၏ဘလော့ဂ်မှ Burj Khalifa မှမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံအသစ်များ၊ နေရာများမကြားရသောလမ်းမြင်ကွင်းကိရိယာအသစ်နှင့်အတူယူဆောင်ခဲ့သည်။
ကမ်းခြေသို့ယူရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခု
နွေရာသီရောက်တိုင်း၊ ငါတို့ကမ်းခြေသို့အဘယ်အရာယူရမည်နည်း။ ထီး၊ အကာအကွယ်။ ။ ။ Android terminal ရှိကမ်းခြေသို့မည်သည့် application များယူရမည်နည်း။
HP Slate 21: Tegra4ပါ ၀ င်သည့် Android နှင့် ၂၁.၅ လက်မမျက်နှာပြင်ကြီးရှိသည်
HP သည် Android operating system ဖြင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်ဆက်လက်ပေါ်ထွက်နေပြီး၎င်းတွင်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များ၏လိုင်းကိုတိုးချဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင် HP Slate 21 နှင့်အတူ။
သင်၏ Android အတွက် Google Now wallpapers
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ဂူဂဲလ် + မှ၎င်းဂူဂဲလ်မှနောက်ခံပုံ ၄၄ ခုစုဆောင်းခဲ့သည်။ သင်ကသူတို့ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ သင်၏ Android သို့ Google Now ထိပေးနိုင်သည်။
HOLO interface ၏သမိုင်း
ယခုအပတ်တွင်၎င်းင်း၏ပုံသဏ္fromာန်မှသည်၎င်း၏ဗားရှင်းဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းနှင့်၎င်း၏ Android ၏အစပြုခဲ့သည့်အပိုင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
Android စက်ရုပ် Andy ၏မူလအစ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းတွင်၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်လေ့ရှိသောဘလော့ဂ်များအမှတ်တံဆိပ်များ၊ တံသင်များ၊ USB အရုပ်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ ပိုစတာများပေါ်တွင်ရှိသည်။
နယူးဇီလန်တွင် Loon Project သည်ကျေးလက်ဒေသများနှင့်အင်တာနက်မရှိနိုင်သောဒေသများကိုလွှမ်းခြုံရန်စမ်းသပ်နေသည်။
Cloud Robot ၏လက်ဝှေ့စက်ရုပ်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အဓိကဗီဒီယိုဂိမ်းစည်းဝေးကြီး E3 တွင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောလက်ဝှေ့စက်ရုပ်များအကြားတိုက်ခိုက်။
Qualcomm Snapdragon4နှင့်အတူ Samsung Galaxy S800 ကို AnTuTu အခြေခံစံနှုန်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေသည့် chip တစ်ခုပါ ၀ င်သည့် Galaxy S4 ၏မူကွဲအသစ်ဖြစ်သည်။
Atom Z2560 ပရိုဆက်ဆာသည် Samsung Galaxy Tab310.1 တွင်ရှိသည်ဟု Intel ကအတည်ပြုသည်
Intel ၏ Atom Z2560 ချစ်ပ်သည် Samsung Galaxy Tab310.1 တွင်ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟု Intel မှအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
Acer မှ ၅.၇ လက်မအရွယ်ရှိစမတ်ဖုန်း Liquid S1 ကိုကြေငြာခဲ့သည်
အကယ်၍ သင့်မှာ Android Jelly Bean ရှိပြီး ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်ကြီးကြီးထားချင်တယ်ဆိုရင် Acer Liquid S5.7 ဟာနောက်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂူဂဲလ်ခရုမ်းကကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသောဖိုင်အားလုံးကိုအန္တရာယ်ရှိသည့်ဖိုင်များရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင်သိခဲ့သလား။
ရင်းမြစ်များက Sony Xperia L4 'Togari' phablet ကို ၆.၄၄″ မျက်နှာပြင်၊ Full HD နှင့် stylus တို့ဖြင့်အတည်ပြုသည်
Sony ၏ Phablet အသစ်ဖြစ်သော Xperia L4 "Togari" တွင်ထူးခြားချက်အချို့ရှိသည်။
GT-I9600, Samsung Galaxy S4 plus ၏ Benchmark အသစ်ပေါ်လာသလား။
စာနယ်ဇင်းများဖြစ်သော GT-I9600၊ ဖြစ်နိုင်သည့် Samsung Galaxy S4 Plus အမည်ရှိ Bencmark တွင် Samsung terminal မော်ဒယ်သစ်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်ရသလား။
YouTube မှာ 'ငါကံကောင်းမယ်' ခလုတ်ကိုသက်ဝင်စေဖို့လှည့်ကွက်
မနေ့ကသင်မှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ YouTube ကနာမည်ကြီး Google ခလုတ် 'I'm Feeling Lucky' ကိုကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနေသည်ဟုငါပြောခဲ့သည် ကောင်းပြီ၊
Samsung က Verizon Galaxy S4, Tab37.0, Mega 5.8 နှင့် Mega 6.3 အတွက် kernel code ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်
Samsung သည် Galaxy S4, Tab3နှင့် Mega အမျိုးမျိုးအတွက် open source kernel ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်။ ထိုကိရိယာများသည်ရပ်ရွာလူထုအတွက်၎င်းတို့၏ ROM များကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
Bluetooth ကီးဘုတ်ပါ ၀ င်သည့်အလူမီနီယံအဖုံး၊ Nexus7အတွက်အကောင်းဆုံးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
MobileFun မှသူတို့သည် Nexus 7၊ case နှင့် built-in bluetooth 3.0 keyboard ကိုလှပသောအလူမီနီယံဒီဇိုင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ဒီစုံလင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုယူဆောင်လာသည်။
Samsung ၏ Galaxy Note ကို 10.1
Samsung က Apple ၏ iPad နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် Samsung Galaxy Note 10.1 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းရဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့် Stylus ကြောင့်ဒီတက်ဘလက်ဟာသူ့ဟာသူအများကြီးပေးမှာပါ။
Samsung Galaxy S3 mini model GT-I8190 ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်စပိန်နိုင်ငံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Samsung Galaxy S3 model GT-I9300 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
Samsung Galaxy S3 model GT-I9300 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Samsung Spain ၏ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်
Hug ၀ ရက်တောင်ထိပ်မှပထမဆုံးဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုဗြိတိန်မှစူးစမ်းရှာဖွေသူဒဲန်နီယယ်ဟပ် (Daniel Hughes) ကပြုလုပ်သည်
Comic Relief အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပေါင်တစ်သန်းအထိရောက်ရှိရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် Daniel Hughes သည် Eve ၀ ရတ်တောင်ထိပ်မှပထမဆုံးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်ကိုလွှတ်ပေးရန် Samsung ကတိပြု
တခါတရံပြည်ထောင်စုသည်အင်အားကြီးမားပြီးဤကိစ္စတွင်ကဲ့သို့ Samsung Galaxy S4 ၏မှတ်ဉာဏ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများက Samsung သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Navigation side panel သည် Google application များတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Google Earth နှင့် Currents တွင်ရက်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသော Side Navigation Panel အသစ်နှင့်သင်အားကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့သော Androidsis မှယခုတရားဝင်ဖြစ်နေသည်။
Tapjoy မှ Android စျေးကွက်ဝေစုမှအချက်အလက်အသစ်များသည် Samsung ကိုလွှမ်းမိုးထားသည်
Tapjoy မှဒေတာအသစ်က Samsung သည် Android စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားကြောင်းဖော်ပြပြီးဒုတိယနေရာတွင် LG, Sony နှင့် Htc တို့အကြားပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Android အကြီးအကဲသစ် Sundar Pichai ကကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး OS အတွက်အစီအစဉ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Android အကြီးအကဲအသစ်ဖြစ်သူ Sundar Pichai ကလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Android စီမံကိန်းအသစ်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး developer ကိုအာရုံစိုက်သည့် I / O 2013 ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Samsung SideSync သည်၎င်း၏ဗီဒီယိုတွင်အလားအလာကောင်းများပြသသည်
Samsung သည် SideSync ၏ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်
ဂူးဂဲလ်ရဲ့အညွှန်း sidebar ဒီဇိုင်းသစ်ကအခုစံထားလာပြီ
Google ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Earth update မှာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ navigation sidebar အသစ်ကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထိုးနှက်လိုက်ပြီး၎င်းရဲ့ apps များအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လာသည်။
Android နှင့် Apple တို့ကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ဈေးကွက်တွင်ဖျက်စီး
၂၀၁၃ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင် Android နှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော Apple နှင့် Microsoft တို့ကိုဖျက်စီးခဲ့သည်။ စျေးကွက်ဝေစု ၅၉.၅% ရရှိခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S4, အချို့သောချို့ယွင်းချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
Samsung Galaxy S4 တွင်ပြproblemsနာများပိုများလာသည်။ ယခုအချိန်တွင် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်ကိုချုံ့လိုက်သည်
3GB RAM ပါသော Samsung Galaxy Note 3?
ကောလာဟလအသစ်များအရ 3GB RAM ပါသည့် Samsung Galaxy Note3အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Pennsylvania ပြည်နယ်ရှိ Carnegie Mellon တက္ကသိုလ်မှသုတေသနအဖွဲ့သည်ဖန်သားပြင်သေးသေးလေးများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ကီးဘုတ် ZoomBoard ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
LeTrendy ၏ယဉ်ကျေးသော iHM79 သယ်ဆောင်နိုင်သောစပီကာများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ကြဉ်းပေးပါမည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ Samsung Galaxy S4 ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
Samsung Galaxy S4 ကဒီမှာပါ။ မနက်ဖြန်၊ 27ပြီ ၂၇ ရက်တွင်နဖူးစည်းစာတန်းသစ်ရောင်းမည်
Sony သည်၎င်း၏အလုပ်သစ်လုပ်သည့် Sony Xperia Z. ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ကိရိယာနှင့်ပြသသည်။ ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Samsung ၏ Galaxy Note ကို 2
Samsung က phablet ဈေးကွက်ကို Samsung Galaxy Note2နဲ့အတူဆက်လက်လွှမ်းမိုးထားချင်တယ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခု။
Samsung ရဲ့ Galaxy S3 Mini ကို
Samsung သည် S3 ၏ညီငယ်ဖြစ်သော Samsung Galaxy S3 Mini ကိုဒီဇိုင်းတူတူဆွဲထားပြီး dual-core ပရိုဆက်ဆာကဲ့သို့သောနိမ့်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Samsung ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ source code တွင် Samsung Galaxy S4 Mini မှအချက်အလက်များပါဝင်သည်
Samsung ရဲ့ source code ကိုကြည့်ပြီး GT-I9190 အမည်ကိုရှာတွေ့သည်။ Samsung Galaxy S4 Mini ရဲ့အမည်ထက်ပိုတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးဖုတ်ကောင် MMORPG ပါ
ကျေးဇူးပြုပြီး Stay Calm သည် Mobage: Apocalyptic Post-post ကမ္ဘာမှဖုတ်ကောင်များထံမှလာသည့် MMORPG ဖြစ်သည်။
Apple က၎င်း၏ထုတ်ကုန်အပေါ်အာမခံချိုးဖောက်များအတွက် $ 53 သန်းပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
အက်ပဲလ်ဟာထောင်ပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကိုဒေါ်လာ ၅၃ သန်းပေးရမယ်။ သူကစက်ကိရိယာများကိုစိုစွတ်စေသည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲထားသောပြုပြင်မှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း Android 2.2 နှင့်အထက်ထုတ်ကုန်များပေါ်ထွက်လာမည့် Google Play သို့နောက်ဆုံးထွက် update ကို Google ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Urbanears Plattan Black Headphones
မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက်အသုံးအဆောင်များအတွက်အထူးပြု ၀ က်ဘ်ဆိုက် letrendy.com မှပေးသော Urbanears Plattan Black Headphones ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Androidsis အတွက်စာရေးဆရာများကိုရှာဖွေနေသည်
Samsung ကင်မရာထက်ပိုကောင်းတဲ့သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ Sony ကကင်မရာ
Sony သည်ခရစ္စမတ်ပွဲအတွက် Samsung နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည့်၎င်း၏ 20 Mpx ကင်မရာကိုပြသနိုင်သည်။
LG Optimus G သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်သောစမတ်ဖုန်းဖြင့်အဆင့်မြင့်စျေးကွက်အတွက်တိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီး၏အလုပ်သစ်မြင်းခုန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Samsung Galaxy S4 ကိုရောင်းချခြင်းမပြုမီဈေးကွက်ထဲမှဆုတ်ခွာခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Samsung Galaxy S4 အသစ်ကိုရောင်းချခြင်းကိုတားမြစ်လိုက်သည်။
Samsung ရဲ့ Galaxy S3
Galaxy range သည်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင် Samsung ၏ရွှေကြက်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Samsung Galaxy S3 ကသင့်အလုပ်ခွင်ကိုရောက်နေတယ်။
ဒေါ်လာ ၂၅ ခရက်ဒစ်ကဒ်ဒီဇိုင်းရှိသောစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဘက်ထရီအားသွင်းစက်ကိုဈေးကွက်တွင်မကြာသေးမီကအဆိုပြုထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် 5000 mAh ဘက်ထရီပါသောလက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးပေါ်လာသည်
တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် ၄.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် 4.5 mA ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားပြီးအခြားသူများကဲ့သို့ပါးလွှာအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
Samsung Galaxy S2 အတွက်အထူး Jelly Bean ဒေါင်းလုပ်
Samsung က Samsung Galaxy S2 ကို Windows7ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီး Jelly Bean ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဆိုပြုထားသည်။
Neo N003 သည်အဆင့်မြင့် phablet ဖြစ်ပြီးinပြီလတွင်တရုတ်၌ပြသမည်ဖြစ်သည်။
iPad Mini ၏ပြီးပြည့်စုံသောမျိုးပွားမှုကို Android tablet တစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
Samsung Galaxy S4, ဘာကြောင့်များဤမျှလောက်များစွာသောမော်ဒယ်များအကြားကရွေးချယ်?
Samsung Galaxy S4 ကိုအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသလား။
Samsung Galaxy S4, ဒါကမင်းရဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါ
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်အသစ်အပြင် Samsung Galaxy S4 ၏နောက်ကျောဖုံးကိုတွေ့နိုင်သည့်အချို့ဓာတ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
Huawei Ascend G700 သည်ယခင်မော်ဒယ်ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်သည်
Huawei Ascend G700 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်လက်ရှိကုမ္ပဏီ၏အသစ်အဆန်းဖြစ်ပြီးယခင်မော်ဒယ်လ်မှပြန်လည်တပ်ဆင်ထားသည်ဟုဆိုသည်။
Sony Xperia Z သည်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Sony က Xperia Z ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အသစ်မှာရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ update တစ်ခုကိုဖြန့်ချိလိုက်ပြီ။
Samsung Galaxy S4 mini သတ်မှတ်ချက်များကို Twitter မက်ဆေ့ခ်ျတွင်ဖော်ပြထားသည်
Samsung Galaxy S4 mini ကိုပူးတွဲရုပ်ပုံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ Twitter မက်ဆေ့ခ်ျမှတဆင့်အပ်နှံခဲ့သည်။
တရားဝင် Huawei Ascend Mate 6.1 ၏ဈေးနှုန်းကိုနောက်ဆုံးတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Huawei Ascend Mate 6.1 ၏တရားဝင်ဈေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၄၃၀ ဖြစ်သည်။
Nexus4ဒါမှမဟုတ် Samsung Galaxy S4 လား။ ဒါကြောင့်ကောင်းစွာရွေးချယ်ရာတွင်မှကြွလာသောအခါ
Samsung Galaxy S4 နှင့် Nexus4နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သေးငယ်သည့်နှိုင်းယှဉ်မှုကမည်သည့်နေရာသို့ပြန်သွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
Samsung ရဲ့ Galaxy S4
Samsung Galaxy S4 သည်ကိုရီးယားတံဆိပ်၏စမတ်ဖုန်းသစ်ဖြစ်သည်။ ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်အသုံးချမှုများအတွက်ကြီးမားသောတော်လှန်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။
Jawbone လက်ကောက်သည် Android နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S4 တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်တစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၂၃၆ ကုန်ကျနိုင်သည်
ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုအရ Samsung Galaxy S4 သည်ဒေါ်လာ ၂၃၆ ဒေါ်လာစီတန်ဖိုးရှိနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
Samsung Galaxy S3 ကိုယူအက်စ် ၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ Radio Shack မှာ
Radio Shack မှအဆိုပြုထားသောအချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်စတိုးဆိုင်သည် US.D. အတွက်3အတွက်အပြာ Samsung Galaxy S49.99 ကိုရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
SnapDragon4ပါသည့် Samsung Galaxy S600 ဗားရှင်းကော။
Snapdragon4ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည့် Samsung Galaxy S600 ကိုအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy S4 ကိုယူရို ၆၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
အီတလီစတိုးမှထုတ်ဝေသောပုံရိပ်တစ်ခုအရ Samsung Galaxy S4 ကိုယူရို ၆၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ပေါက်ကွဲမှုလေးခုခံစားနေရသော Apple iPhone 5
Apple iPhone5သည်ပေါက်ကွဲမှုလေးခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Sony Xperia Z ၏ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုလက်ဖြင့်အိုးသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်
Sony Xperia Z ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ရန်တစ်နာရီအတွင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Jelly Bean ကို Motorola Electrify2အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
Motorola Electrify2တွင် Jelly Bean Android 4.1 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Samsung Galaxy S4 ဘက်ထရီမှာ NFC chip ပါလိမ့်မယ်
Samsung Galaxy S4 မှာ NFC ချစ်ပ်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတာအတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီနည်းပညာကို 2600mAh ရှိတဲ့ဘက်ထရီထဲကိုထည့်သွင်းပေးမှာပါ။
Jelly Bean နှင့် Windows 8 Asus Transformer AIO တွင်ရှိသည်
Asus Transformer AIO သည် All-in-One ကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစပိန်တွင်ပြသခဲ့ပြီး Android တက်ဘလက်ကြီးတစ်ခုသို့အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S4 တွင် 3D ကင်မရာတစ်ခုတပ်ဆင်နိုင်သည်
Samsung Galaxy S4 စတင်ပြီးမကြာမီတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် 3D ကင်မရာမူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Samsung Galaxy S4 ၏ပုံရိပ်သစ်
Samsung Galaxy S4 ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသောပုံရိပ်ကိုပြသခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S3 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Samsung Galaxy S3 ၏တွဲဖက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Letendry ကားကိုင်ဆောင်ထားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gadget တွေသုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှကာကွယ်ရန် Gesture ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုင်ခုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
တရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်တရားမဝင်သောအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အသုံးပြုရန်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်း။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န ၀ ါရီလ ၂၃ ရက်ဥပဒေအရမူရင်းကုမ္ပဏီနှင့်မတူသည့်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်းသည်တရားမဝင်သောအကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်
Android ဖုန်းများသည် encrypted data ကိုရယူရန်ခဲယဉ်းသည်
Friedrich-Alexander University (FAU) မှဂျာမန်သုတေသီသုံး ဦး သည် Android ဖုန်းများအေးခဲပြီးသောအခါသင်ရရှိနိုင်သည် ...
အသံဖမ်းနေစဉ် HTC One ၏မိုက်ကရိုဖုန်းအတွင်းရှိလျှို့ဝှက်ချက်
HTC One ၏မိုက်ခရိုဖုန်းသည်အမြှေးပါးအလွှာနှစ်ခုရှိနေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာမည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆိုသစ္စာရှိသောအသံသွင်းခြင်းကိုပေးလိမ့်မည်။
အဆက်အသွယ်များ +၊ သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုစီမံရန်အခမဲ့လျှောက်လွှာ
Contacts + သည်အခမဲ့အခမဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်ပြီး Play Store တွင်တရားဝင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်များစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။
ဗွီဒီယိုတစ်ခုက HTC One မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကိုပြသည်
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုတစ်ခုသည် HTC One သို့ပေးသောအသေးစိတ်နှင့်အပ်နှံမှုကိုပြပြီးစုစုပေါင်းမိနစ် ၂၀၀ ခန့်ကြာလိမ့်မည်။
သင်၏ Samsung Galaxy S3 ကိုရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းမှကယ်တင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း
Samsung Galaxy S3 တွင်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း၏ပြcompletelyနာကိုလုံးဝမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမည်သို့လျှော့ချရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်
Samsung Galaxy S4 နှင့်မျက်လုံးခြေရာခံခြင်း
Samsung Galaxy S4 ၏လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီဖြစ်ပြီးကောလာဟလသာဖြစ်ရင်တောင်မှအားကောင်းလာသည်။
Magic ကို Samsung Galaxy S4 ၏ရှေ့ကင်မရာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်
လူအတော်များများအတွက်တော့မှော်ဆန်တာပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သူကရှေ့ကင်မရာမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Samsung Galaxy S4 ထဲကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုထည့်သွင်းထားတယ်။
MWC 2013, ဥရောပဈေးကွက်အတွက် Samsung ပုံစံသစ်
မကြာသေးမီကပြီးစီးခဲ့သည့် MWC 2013 တွင်ဥရောပဈေးကွက်တွင် Samsung ကလတ်တလောတွင်စတင်ရောင်းချမည့်အလယ်အလတ်တန်းစား Terminal များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Android 4.1.2 အသုံးပြုထားသော Samsung Galaxy တွင်အားနည်းချက်အသစ်တစ်ခု
Android 4.1.2 အသုံးပြုထားသော Samsung Galaxy ထုတ်ကုန်များတွင်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီ bug သည်အဓိက desktop သို့သွားရန်ခွင့်ပြုသည်
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှကျွန်တော်ဟာ Google စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုအနက်ရောင် navigation bar ကိုမီးခိုးရောင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ သင့်ကိုဘယ်လိုပြသလဲ ...
နည်းပညာဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုအဆင့်သစ်သို့ယူဆောင်လာသည်။ ဆယ်နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းများသို့ရောက်ရှိလာမည့်အသစ် ၆ မျိုး။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမိုဘိုင်းဖုန်း E-Ink ကို MWC 2013 တွင်တင်ပြခဲ့သည်
E-Ink သည်အလွန်ချွေတာသောမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ MWC 2013 တွင်ဒေါ်လာ ၅၀ သာတန်ဘိုးရှိပြီးစျေးကွက်ထဲတွင်အပေါဆုံးဖြစ်သည်။
Samsung Multitasking ၏ဗီဒီယိုကို MWC 2013 တွင်ပြသခဲ့သည်
Samsung Grand ကို MWC 2013 ပြပွဲတွင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းပေါ်ရှိ multitasking လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၏ထိရောက်မှုနှင့်အသုံးဝင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
MWC 2013, Huawei Ascend G350, လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
Huawei သည် MWC 2013 တွင်ရေစိုခံနိုင်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Huawei Ascend G350 နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရေအောက်တွင်ရိုက်ကူးခွင့်ပြုသည်။
MWC 2013 တွင် LG Optimus Vu2ကိုပြသခဲ့သည်
MWC 2013 ကိုဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး LG Optimus Vu2နှင့် LG Vu Talk application ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။
MWC 2013, LG Optimus G၊ LG သားရဲ
LG ကအိမ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးသည်မကြာမီစပိန်သို့မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည့် LG Optimus G ကုမ္ပဏီကိုပြသလိုက်သည်
MWC 2013, Sony သည် Android နှင့် iOS အတွက် Play Station4application ကိုပြင်ဆင်သည်
Sony က Android နှင့် iOS အတွက် application တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ၎င်းမှစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်ဂိမ်းများကိုတိုက်ရိုက်ကစားနိုင်သည်။
Geeksphone သည် Mozilla operating system သစ် Firefox OS ကိုအထူးသဖြင့်ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး MWC 2013 တွင်စမတ်ဖုန်းအသစ် ၂ ခုကိုပြသမည်။
Alcatel သည်ဘာစီလိုနာပြပွဲတွင်လက်ကိုင်ဖုန်းမော်ဒယ်လ်နှစ်လုံးပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုမှာ high-end တစ်ခုနှင့်အခြား low-end ဖြစ်သည်။
HTC M7 ၏ယိုစိမ့်နေသောပုံရိပ်သည်အနက်ရောင်ပေါ်နေသည်
အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော HTC M7 ၏ပုံများအရလာမည့်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်ကိုလန်ဒန်နှင့်နယူးယောက်တို့တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည်။
Gamestick - Android အတွက်ဗွီဒီယိုဂိမ်းခလုတ်အသစ်
Gamestick သည် Android နှင့်အထူးပြုလုပ်ထားသော Controller နှင့် video game console ဖြစ်သည်။
Sony Xperia ZL ကိုinပြီလတွင်ကနေဒါ၌ရောင်းချမည်
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်များနှင့်အတူ Sony Xperia ZL ကိုCanadaပြီလတွင်ကနေဒါ၌ပြသမည်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်တွင်ယူရို ၇,၉၀၀ ရှိသော Vertu Ti
ဤသည် Vertu Ti အတွက်ပေးချေရန်ယူရို ၇,၉၀၀ တွင်အပြည့်အဝတရားမျှတသည်၊ ၎င်းတွင်ဒြပ်စင်တစ်ခုရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
LG နှင့် MWC 2013 အတွက်အံ့အားသင့်စရာများ
LG ကုမ္ပဏီသည် MWC 2013 တွင်ဘာစီလိုနာ၌ကျင်းပမည့်ကြေငြာချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်များစွာကြောင့်အံ့အားသင့်သွားသည်
Android 4.2.2 ကို OTA မှတစ်ဆင့် Nexus သို့စတင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့မှာဂူဂဲလ်၏မိုဘိုင်းလည်ပတ်မှုစနစ် Android 4.2.2 ဗားရှင်းအသစ်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မတူညီသော bug များကို ၅၀ Mb သာပေးသည်။
Bq Aquaris, စပိန်ထုတ်လုပ်မှု၏နှစ်ဆအဓိက
တက်ဘလက်များနှင့် e-book များအထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Bq သည် dual-core ပရိုဆက်ဆာပါသည့် Bq Aquaris နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်သို့ထိုးဖောက်ရန်ကြိုးစားလိုသည်။
WindowsAndroid: သင်၏ PC တွင် Android ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်
Windows ကို Android သုံးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ BlueStacks, Android x86, SDK Emulator စသည်ဖြင့်နာမည်များစွာဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
Android 4.2.2 အသစ် update
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း Google သည် OTA မှတစ်ဆင့် Android version 4.2.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်
Samsung Galaxy S4 သည် pixel technology ကိုမိတ်ဆက်ပြသပါမည်
Samsung Galaxy S4 ဖုန်းအသစ်သည် Audiovisual နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကိုပွဲထုတ်မိတ်ဆက်မည်
ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးသို့အသစ်ရောက်ရှိလာသည့် LifeKraze ၏လူမှုကွန်ယက်သည်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ထားရှိသည့်ကွဲပြားခြားနားသောပန်းတိုင်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုဝေမျှရန်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုအခြေခံသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကပေါက်ကြားခဲ့သောဓာတ်ပုံသည်ဂျပန်ဈေးကွက်တွင်လွှမ်းမိုးရန်ရည်ရွယ်သော Sony Xperia Togari ဆိုနီ၏သားရဲ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ပထမဆုံး Motorola မိုဘိုင်းဖုန်းဘယ်လိုမှတ်မိသလဲ။
Martin Cooper သည် Motorola DynaTAC (ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်း) ဖြင့်ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်သူကိုပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော Joel Engel သို့ခေါ်ဆိုလိမ့်မည်။
Motorola DROID RAZR M သည် Valentine's နေ့ကိုမျှော်လင့်သည်
Valentine's Day ကိုဇန်န ၀ ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်အော်ပရေတာ Verizon သည်ပန်းရောင်ထုတ် Motorola DROID RAZR M ကိုစတင်မည်။
Sony Xperia Z ကို ၅ မိနစ်တပ်ဆင်ထားသည်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုက Sony Xperia Z ကို ၅ မိနစ်အတွင်းဘယ်လိုစုစည်းရမယ်ဆိုတာပြတယ်။
Android2၏နောက် version အတွက် Bluetooth A4.2DP မှတစ်ဆင့်အသံပြန်လည်ဖွင့်ရန်အဖြေတစ်ခုကို Google ကအတည်ပြုသည်
Android 4.2 တိုးတက်မှုများစွာရရှိသော်လည်း၎င်းင်း၏ပြshareနာများကို platform သို့ယူဆောင်လာသည်။ သူတို့တွင် ...
Jelly Bean update ကို Samsung Galaxy S2 အတွက်နောက်လတွင်ကြေညာခဲ့သည်
ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင် Samsung Galaxy S2 သည် Android 4.1.2 သို့ Samsung Kies စနစ်ဖြင့် update တစ်ခုရှိနိုင်သည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် iPhone5 ၏ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ပွားကိုပြသသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက iPhone5 ကို Android operating system တစ်ခုအနေနဲ့ iOS interface နဲ့လည်ပတ်စေမယ့် clone တစ်ခုကိုစျေးကွက်ထဲမှာရောင်းချဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။
Samsung Galaxy S စီးရီးသည်ရောင်းအားသည်သန်း ၁၀၀ ကျော်သည်
Samsung Galaxy S လိုင်းသည်ယခုအချိန်ထိရောင်းအားသန်း ၁၀၀ အထိရှိခဲ့သည်။
Moga Pro - Android Game Controller အသစ်
Moga Pro နှင့်အတူ Android ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုများဖြင့်ပိုမိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Tactus မှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ touch keyboard တပ်ဆင်ထားပါတယ်
Tactus ကုမ္ပဏီသည်ရိုးရာကီးဘုတ်တွင်စာရိုက်ခြင်း၏ခံစားချက်ကိုတုပရန် touch screen များအတွက်နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်
Android: ၂၀၁၂ အတွက်သုံးသပ်ချက်နှင့် ၂၀၁၃ အတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ
၂၀၁၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၏သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ကျော်သွားပြီဖြစ်သော Googlelizados တွင်၎င်းသည်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုအလား ...
Qualcomm သည် Snapdragon 800 နှင့် 600 အသစ်ပရိုဆက်ဆာအသစ်များကိုပြသသည်
Qualcomm သည် Snapdragon 800 နှင့် Snapdragon 600 ပရိုဆက်ဆာအသစ်များကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအားနှင့်အရင်ကတစ်ခါမှမမြင်ဖူးပါ။
Samsung Galaxy S3 mini ကို Android 4.1.2 ဖြင့်ရောင်းချသည်
မကြာသေးမီကသတင်းများအရ Samsung Galaxy S3 mini သည်စျေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီး Android 4.1.2 ဖြင့်ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၄၀၀ ဖြစ်သည်။
Galaxy S4 - ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာကိုဗီဒီယိုဖြင့်ပြသခြင်း
Samsung Galaxy S4 ၏ဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းပညာများနှင့်ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
Samsung Galaxy Note2အနက်ရောင်လိုချင်ပါသလား ဖြစ်နိုင်သည်မှာမရှိတော့ပါ
အနက်ရောင် Galaxy Note2ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ကောလဟာလကမှားနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဟာအမည်မသိအသုံးပြုသူဖန်တီးတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်လို့ပဲ။
Android စကြ ၀ inာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာမှတ်တိုင် ၁၀ ခု
ဒီနှစ်မှာ Android ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စရာများစွာဖြစ်စေခဲ့သည်။ Androidsis မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကဏ္a၏အဓိကမှတ်တိုင်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားရန်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
Hyundai သည် NFC မိုဘိုင်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ (သို့မဟုတ်ခိုးယူခံရလျှင်သော့ခတ်) နိုင်သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကားတစ်စီးကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည်လုံခြုံရေး application များကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်
Samsung Galaxy S4 ကိုAprilပြီလတွင် S-Pen ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်
မကြာသေးမီကမှထွက်ပေါ်လာသည့်ကောလာဟလအသစ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် Samsung Galaxy S4 သည်-ပြီလတွင် S-Pen နှင့်အတူပါရှိမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
Android 4.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Sony Xperia TL ဖြင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုပေါ်လာသည်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ Sony Xperia TL ရဲ့ Android 4.1.2 နဲ့အတူသူ့ရဲ့တရားဝင် update မတိုင်မီထိရောက်မှုကိုပြသသည်။
GT-i9500 သည် Samsung Galaxy S4 အတွက်ကုဒ်နံပါတ်ဖြစ်နိုင်သည်
Samsung Galaxy S4 နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများစွာက "4" နံပါတ်သည်ကုမ္ပဏီအတွက်ကံမကောင်းကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
၎င်းသည်တရားဝင်စာရင်းမဟုတ်သော်လည်း App Store မှ၎င်း၏အကောင်းဆုံး application များနှင့် ...
ထုတ်လုပ်သူများက HD ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာအသစ်များတီထွင်ကြသည်
Aptina သည်မိုဘိုင်းကင်မရာအာရုံခံကိရိယာထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းကိုရိုက်ကူးစဉ် 1080p နှုန်းဖြင့် 60 fps နှုန်းဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။
Pogo လို့ခေါ်တဲ့ Nexus 10 အတွက်အားသွင်းတဲ့ပုံကပေါ်လာတယ်
မကြာသေးမီကသတင်းများအရ Samsung က Nexus 10 အတွက်တီထွင်မည့် pogo ဟုခေါ်သောသံလိုက်အားသွင်းစက်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆမ်ဆောင်းကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်ပါတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်
Samsung ကလာမယ့် CES 2013 အတွက်အလွန်အဆီကျနေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်ပါတဲ့စက်တစ်လုံးကိုပြသခဲ့ပါတယ်။
လက်ဆောင်ဂိမ်းများ (၆) - «မြန်နှုန်းလိုအပ်: အလိုအပ်ဆုံး»
ကျွန်ုပ်တို့၏သတ္တမမြောက်လက်ဆောင်ဂိမ်းများသည်ကားမောင်းခြင်းကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်သည်။ Need for Speed: Most Wanted ။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို Google Nexus4၏ USB port နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ
မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့်ခဲ့သောသတင်းတစ်ခုအရ Google Nexus4၏ USB port နှင့်စျေးကွက်ရှိဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြားသဟဇာတဖြစ်မှုကိုဖော်ပြထားသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုက Sony Xperia ဖုန်းကို flash လုပ်တဲ့ပုံပါ
Sony Xperia Arc, Xperia S နှင့် Xperia Arc S တို့ကိုကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းသည့် application နှင့်အလွယ်တကူအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်သည်။
AnyGlove သည် touch screen များ၌လက်အိတ်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်
Sony က Xperia E ကိုစျေးကွက်ထဲတွင်အနိမ့်ဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းအဖြစ်တင်ဆက်သည်
Sony သည် Xperia E နှင့်အတူဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဘတ်ဂျက်နိမ့်ပါးသောရည်မှန်းချက်နိမ့်နိမ့်နည်းပညာကိုရထိုက်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်မွမ်းမံမှုများ Sony Xperia ဖုန်းများအတွက်စီစဉ်ထားသည်
မတူညီသော Sony Xperia မိုဘိုင်းမော်ဒယ်များကို ICS နှင့်အတူ ၂၀၁၃ မကုန်မီအထိ Jelly Bean နှင့် Q20133တွင်အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်သည်။
Samsung GT-I9525 သည်မကြာမီတွင် Android 5.0 ၏ပထမဆုံးလက်ဗွေရာဖြစ်နိုင်သည်
မကြာသေးမီကထွက်ပေါ်ခဲ့သောကောလာဟလသတင်းများအရ Samsung GT-I9525 သည် Android 5.0 ရှိသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
Samsung Galaxy Note2အတွက်စွမ်းအင်နှစ်ဆပိုသောဘက်ထရီအသစ်
Samsung Galaxy Note2စွမ်းရည်ကိုနှစ်ဆတိုးစေရန်စွမ်းအင်တိုးချဲ့ထားသောဘက်ထရီအသစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှစ၍ ရောင်းချခဲ့သည်။
အသုံးပြုသော Samsung Galaxy S3 မော်ဒယ်များကိုစျေးအလွန် နည်း၍ စတင်ရောင်းချသည်
အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Samsung Galaxy S3 ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဖြူရောင်ဟာဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
၂၀၁၃ မေလ LG Optimus G5 တွင် ၅ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင်
LG Optimus G2 သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလတွင်အမြန်နှုန်း၊ လည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်နှင့် HD မျက်နှာပြင်ပါသည့် quad-core ပရိုဆက်ဆာကိုပွဲထုတ်မည်။
Samsung က Apple အတွက်ဘက်ထရီတွေထောက်ပံ့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပြီးနောက် Samsung နှင့် ပူးပေါင်း၍ တက်ဘလက်များနှင့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ဘက်ထရီများထုတ်လုပ်ရန်ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
PlaceRaider, ပင်တဂွန်မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့် malware
အလွန်ပါးလွှာသောမိုဘိုင်းဖုန်းများသည် ၁ လမီလီမီတာအထူရှိသည့်လက်များကိုအချိန်တိုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့လက်သို့ရောက်နိုင်သည်။
Angry Birds Star Wars ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Angry Birds Star Wars နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းကိုပြုလုပ်ပါသည်။
Samsung Galaxy S4 တွင်ကောလဟာလများထွက်ပေါ်
Samsung Galaxy S4 ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင်စတင်ထွက်ရှိနိုင်သည့်နေ့စွဲ
မြင့်မားသောအာကာသ, Kickstarter ကအပေါ်အာကာသ Simulator ကို
သင်သည်အထူးသင်္ဘောများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထက်သန်ပါသလား သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် RPGs? Divine Space ကိုကြည့်ပါ
Claystone Launcher သည် 3D Launcher ဖြစ်သည်
Claystone Launcher သည် Play Store မှ Android အတွက် 3D Launcher ကိုအခမဲ့ရနိုင်သည်။
Vodafone တိမ်တိုက်၊ လုံခြုံရေးနှင့် cloud သိုလှောင်မှု
Vodafone သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီများနှင့် Movistar နှင့် Yoigo ကဲ့သို့ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး Vodafone Cloud ဟုခေါ်သောသိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
Samsung Galaxy S3 Mini ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်
Samsung က Samsung Galaxy S3 Mini၊ dual-core ပရိုဆက်ဆာနှင့်လေးလက်မအရွယ် Super AMOLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။
သင့်မိုဘိုင်းစက်၏ဒေတာဆက်သွယ်မှုအတွက် APN အသစ်တစ်ခုကိုပြုပြင်ခြင်းနည်းလမ်း
ZTE Grand X IN, ZTE နှင့် Intel တို့ပူးပေါင်းသည်
ZTE သည်ဘာလင်ရှိ IFA တွင် ZTE Grand X IN စမတ်ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Intel ပရိုဆက်ဆာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။
CyanogenMod 10 (Android 4.1.1) ၏ပထမဆုံး Nigthly's သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်
CyanogenMod 10 Nigthly's သည်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများစွာအတွက်ဤနေရာတွင်ရှိသည်
Samsung Galaxy SIII - အဆင့်တစ်ဆင့် Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy SIII ကို root နှင့် recovery လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ
နောက်ဆုံးထုတ် Madfinger Games မှကြည့်ပါ။ Dead Trigger သည်ရိုးရှင်းပြီးဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရိုးသားမှုမရှိ။
Android9Jelly Bean ထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်အသစ် ၉ ခုနှင့်တွေ့ဆုံပါ
Android 4.1 Jelly Bean ထည့်သွင်းထားသောအဓိကဝတ္ထုကိုးခုကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည်၊ ၎င်းသည် Google I / O ကွန်ဖရင့်၌တင်ပြခဲ့သည်
multicore ပရိုဆက်ဆာများသည် Android အတွက်ကောင်းကောင်းမစွမ်းနိုင်ကြောင်း Intel ကတွေ့ရှိခဲ့သည်
Android စမတ်ဖုန်းများ၌ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသည့် multi-core ပရိုဆက်ဆာများကိုကောင်းမွန်စွာမထုတ်လုပ်နိုင်ဟု Intel ကယုံကြည်သည်။
ZTE မှအပါးလွှာဆုံးစမတ်ဖုန်း ZTE Athena
ယိုစိမ့်သောပုံရိပ်က ZTE Athena ဟုခေါ်သောတရုတ်ကုမ္ပဏီမှစမတ်ဖုန်းအသစ်ကို၎င်း၏ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းဖြင့်ဖော်ပြသည်။
၉ သန်း Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S2 အသစ်ကိုမစတင်ခင် ၂ ပတ်အလိုတွင်၎င်းသည်သုံးစွဲသူကိုးသန်းအားဖုန်းကိုကြိုတင်မှာယူထားပြီးဖြစ်သည်။
Pebble သည်စမတ်နာရီကို Android နှင့် iOS ဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အသိပေးချက်လက်ခံရရှိသည်။
Rain Alarm (Rain Alarm) ကသင့်အား Android တွင်သင့်အားအချိန်မှန်ရောက်နေသည့်မိုးရွာမှုအကြောင်းသင့်အားအသိပေးသည်
Android ကကော်ဖီသောက်တာ (ပျောက်နေတယ်ဆိုတာ)
Android သည်ကော်ဖီသောက်ခြင်း Zipwhip ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည် SMS မှသင်ကြိုတင်မှာယူထားသောကော်ဖီကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးသောစက်တစ်ခုဖန်တီးပေးခဲ့သည်
LG Cloud သည်သင့်အား Cloud သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်
LG Cloud သည်သင်၏ multimedia ဖိုင်များကိုသင်၏ Android, PC (သို့) LG TV များပေါ်တွင် streaming ဖြင့်စားသုံးရန် Cloud တွင်သိုလှောင်သည်
Google Play သည်လစဉ်ဖုန်းခဖြင့်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုပေးချေလိမ့်မည်
ဂူဂဲလ်သည်သင်၏ Google Play ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာ၏ငွေတောင်းခံလွှာမှတဆင့်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်
Samsung Galaxy S3 အသစ်
Samsung Galaxy S3 အသစ်နှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များကိုတင်ဆက်ထားသည်
ဟက်ကာသည်ဒေသတွင်းအကာအကွယ်မရှိဘဲ Google Play ကိုထုတ်ဝေသည်။
ယနေ့အင်တာနက်ဖြင့်လက်ရှိပထဝီဆိုင်ရာအတားအဆီးအားလုံးနီးပါးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ မျှဝေနိုင်သည်၊ ပြောဆိုသည်၊ ကြည့်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို ဒါကြောင့် Android သုံးစွဲသူများသည် Google Play (စျေးကွက်ဟောင်း) တွင်ဒေသဆိုင်ရာပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုရှိနေသေးသည်ဟုတွေးမိကြသည်။ သင်သတိမထားမိသေးသောသူများအတွက်မည်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်သည့် application များရှိသည်။
Sony Xperia S ၏အချို့ဖန်သားပြင်များတွင်ပြaနာရှိနေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်
LG Optimus L3 သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်စျေးနှုန်းဖြစ်သည်
LG သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုသည်။ LG Optimus L3 ဟုခေါ်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းကို Android ချစ်သူများနှစ်သက်သည့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်တင်ဆက်ခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Asus ဟာ Hasbro ကိုစစ်တိုက်ပါတယ်
Asus သည် Hasbro ၏တက်ဘလက်များပေါ်တွင် Transformer Prime အမည်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် Hasbro တရားစွဲဆိုမှုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
Angry Birds Space သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲအသစ်ဖြစ်သည့်အရစ်ကျဖြစ်သည့်ငှက်များသည်အာကာသထဲသို့သွားသည်။ ဂိမ်းရဲ့အဓိကအကြောင်းကအမြဲတမ်းအတူတူပါပဲ၊ သင်ငှက်ကို slingshot ကနေလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးကြက်ဥခိုးတဲ့ဝက်ကိုထိရမယ်။ Angry Birds Space တွင်သာကျွန်ုပ်တို့သည်အာကာသထဲသို့ရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွဲငင်အားနှင့်၎င်း၏ရူပဗေဒအသစ်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဆွဲငင်အားသည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုလှည့်စားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွဲငင်အားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငှက်များကိုသူတို့၏လမ်းကြောင်းမှသွေဖည်စေသကဲ့သို့၎င်းတို့၊ ငှက်များ၊ ဝက်များနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများနှင့်ဂြိုလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Qualcomm Snapdragon GamePack ဂိမ်းကစားခြင်းပေါ်တယ်
Qualcomm Snapdragon GamePack သည်ဂိမ်းသစ်လေးမျိုးဖြစ်သော Virtua Tennis Challenge, Amira ၏ Reign, The Reem, The Ball နှင့်အတူဖွင့်လှစ်မည့်ဂိမ်းပေါ်တယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
LG သည်ယခုအပတ် MWC 2012 ၌ CMR-800 အဖြစ်နှစ်ခြင်းခံထားသောကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်သစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းအရင်းများ (အများဆုံးမကြာခဏ) နှင့်ရုတ်တရက်မြင့်မားသောဘက်ထရီစားသုံးမှုပြtheနာကိုသင့်အားရှင်းပြပါမည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ချက်ချင်းလက်ငင်းဘက်ထရီယိုစီးမှု၏အဓိကတရားခံမှာ CPU ၏အမှားဖြစ်သည်။
Mantano Reader ။ စာအုပ်များနှင့် pdf ၏ဂရိတ်စာဖတ်သူကို။
Market တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်စာတမ်းနှင့်စာအုပ်ဖတ်သူများအဖြစ်လုပ်ကိုင်သော application အမြောက်အမြားကိုတွေ့ရှိသော်လည်းအကောင်းဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးမှာ Mantano Reader ဖြစ်သည်။ Mantano Reader သည်အလွန်အစွမ်းထက်သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်စာအုပ်စာဖတ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အသုံးအဆောင်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ဖိုင်များကိုကာကွယ်ရန် username နှင့် password ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ စာတစ်ကြောင်းမှစာဖတ်ခြင်း၊ စာမျက်နှာတစ်ခုမှဖိုင်တစ်ခုလုံးသို့ဖတ်ပါ။ စာသားသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်မှတ်စုများ။ မှတ်စုများ၊ bookmarks များနှင့်စာသားကိုမျဉ်းသားထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုအဘိဓါန်သို့မဟုတ်ဝဘ်ဆိုက် (Google, Wikipedia, etc) တွင်ရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဘိဓာန်များသည်အွန်လိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ရနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင် ညအလင်းရောင်နည်းသောအခါပိုမိုကောင်းမွန်သောစာဖတ်ခြင်းအတွက်ည mode ။ များစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်အသုံးအဆောင်များ။
ကောလာဟလ - Mobile World Congress အတွက် Samsung စမတ်ဖုန်းအသစ်ရဲ့ပုံရိပ်ဓာတ်ပုံအတုလား။
ပုံရိပ်အသစ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်၎င်းသည်လာမည့် Mobile World Congress တွင်ပြသမည့်နောက်ဆုံးပေါ် Samsung စမတ်ဖုန်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်
ဂိမ်းကစားသူများအတွက်သတင်း (၁) ။ Android မှာ PSP ကိုကစားပါသလား။
ဆိုနီသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွင်တိုးတက်မှုရှိကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ "console-phone" ၏အယူအဆကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် Xperia Play ထွက်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။ Sony သည်၎င်း၏ PSP ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို Android ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်ဖြန့်ချိမည်။
G-Shock သည် Casio စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Huawei သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Huawei Honor ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Huawei သည်အခြားစမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကိုထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်သည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးဖြန့်ချိမှုဖြစ်သည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်း၏ဘက်ထရီသည်မည်မျှကြာရှည်သနည်း။ ၁၂ နာရီ ... ၁ ရက်အနိုင်နိုင်လား အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးအဆောင်များစွာပါ ၀ င်သောစွမ်းအားကောင်းသောစမတ်ဖုန်းရှိခြင်း၏အားနည်းချက်တစ်ခုမှာဘက်ထရီအားအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းစတိုးတွေမှာ Android စမတ်ဖုန်းအတွက်အခြားဘက်ထရီများစွာကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်။ ဒီနေ့ငါတွေ့ပြီအမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်နှင့်အတူဘက်ထရီအကြောင်းပြောဆိုလာကြသည်။
ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်“ လှည့်ကွက်” များသို့မဟုတ်အကြံပေးချက်များအားလုံးသည်မမှန်ပါ၊ အများစုသည်လိမ်လည်မှုများဖြစ်သည်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်ပြောမည့်အကြောင်းအရာနှင့်တူသည်။
Sony Ericsson Xperia Ray (နှင့် II) ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဖန်သားပြင်နှင့် terminal ၏ hardware ကိုလေ့လာပြီးနောက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဤဆော့ဝဲလ်အကြောင်းပြောမည်ဖြစ်သည်။
Sony Ericsson Xperia Ray (၁) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Sony Ericsson ရှိလူများထံမှကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Xperia Ray ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ထားနိုင်ခဲ့သည်။